काठमाडौंमा यी ठाउँमा धमाधम घर खाली हुन थाले, २० हजार पर्ने फ्ल्याट अब १२ हजारमै पाइन्छ !! – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाडौंमा यी ठाउँमा धमाधम घर खाली हुन थाले, २० हजार पर्ने फ्ल्याट अब १२ हजारमै पाइन्छ !!
काठमाडौंमा यी ठाउँमा धमाधम घर खाली हुन थाले, २० हजार पर्ने फ्ल्याट अब १२ हजारमै पाइन्छ !!
चीनवाट सुरु भएको कोरोना अहिले विश्वव्यापी फैलिएको छ । नेपालमा पनि दिनहुँ कोरोना संक्रमितको संख्या थपिएका छन् । सरकारले चैत ११ गते देखि लकडाउन सुरु गरेको हो । लकडाउनु सुरु भएसंगै काठमाडौंमा डेरा गरेर बसेका बाहिर जिल्लाका स्थानिय घर गएका छन् ।
त्यसैले अब काठमाडौंमा भाडामा बस्नेहरुले कोठा छोड्न थालेका छन् । लकडाउन हुनु अघि कोठा पाउन निकै मुस्किल भएकोक ाठमाडौंमा अहिले घर खाली हुन थालेका छन् । पसल ब्यवसाय सञ्चालन गरेकाहरुले धमाधम बन्द गरेका छन् भने बेरोजगार बनेकाहरु घर फर्कन थालेका छन् ।
लडाउनको कारणले काठमाडौंमा भोकै परिएला कि भनेर गाउँ फर्कनेको संख्या बढेको छ । पसल ब्यवसाय बन्द भएका कारण सटरहरु खाली भएका छन् भने घरमा भाडामा बस्नेहरु पनि घट्न थालेका छन् ।
काठमाडौंका कोठाहरु खाली हुनथाले पछि घरधनीले सस्तोमा नै कोठा भाडामा दिन थालेका छन् । सस्तोमा कोठा पाइने भएपछि महंगो भाडा लिएकाहरुले पनि कोठा छोड्न थालेका छन् । काठमाडौंको विभिन्न स्थानमा महंगोमा बस्नेहरु त्यही बराबरको कोठा सस्तोमा फेला पारेको बताएका छन् ।
उनीहरुले सस्तो कोठामा आफुहरु सरेको बताएका छन् । लकडाउन अघि सम्म काठमाडौंको कलंकी स्थित मैत्रीनगर बस्ने राजु बलामीले ३ वटा कोठा २० हजारमा लिएका थिए । तर लकडाउन पछि नजिकै त्यती नै कोठा १२ हजार रुपैयामा पाएपछि त्यतै सरेको बताएका छन् ।
भाडामा बस्ने कोठा मात्र होइन पसल गर्ने सटर पनि खाली हुन थालेपछि घर धनीले सस्तोमै उपलब्ध गराउन थालेका छन् । पसल ब्यवसाय छोड्नेहरुको लहर चलेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । काठमाडौंको कलंकी, कालिमाटी, बल्खु, टेकु, थापाथली, सतुंगल, नयाँबजार, कीर्तिपुर, धोबिघाट, तिनकुने, जडिबुटी, बलाजु र थानकोट लगायतका स्थानमा कोठा खाली हुन थालेका छन् ।
रूसमा ६ लाख ६१ हजारभन्दा बढीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण
बिजुलीको पोलमा ठोक्किएर मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा प्रहरी हबलदारको मृत्यु
लक्षण भएका संक्रमित बढ्दै जाँदा कोरोनाले रुप परिवर्तन गरेको विज्ञहरुको निष्कर्ष (भिडियो)
भारतको मध्यप्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज चौहान पनि बने कोरोनाको शिकार
बलिउड सुन्दरी नायिका मौनी रोयलाई लकडाउनले दुबईमा अलपत्र पार्यो, भारत आउन नपाएपछि लण्डन उडिन्